Furaha birta ah ee lagu rakibay is-u adeegsiga is-adeegsiga ee Kiosk ee Denmark-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Furaha birta dhagaxa ah ee lagu rakibay Kiosk iswiidhishka ah
Waqtiga: 2020-06-05 Hits: 16
Dukaamada adeegga iskaa wax u qabso ah waa aalado taxane ah oo aalado caqli badan oo bixin kara iskaa wax u qabso maalintii oo dhan oo ay fududaato in la shaqeeyo oo ku habboon. adeegyo kala duwan oo habboon, oo ay ku jiraan lacag bixinta khidmadaha dadweynaha, bixinta dib u bixinta taleefanka gacanta, iibsashada tikidhada filimka, iibsashada tigidhada daryeelka, iibsiga tigidhada tareenka, iibsiga tigidhada tareenka, daabacaadda iibsiga caymiska, bixinta kaarka bangiga, dib u bixinta kaarka deynta, dheelitirka kaarka bangiga weydiin iyo wixii la mid ah.
Xirmooyinka lacag-bixinta ee is-adeegga ayaa awood u leh kala-duwanaanshaha u dhexeeya tartamayaasha waxayna u keenaysaa faa'iidooyin macaamiisha iyo adeeg-bixiyuhuba xagga dabacsanaanta, xakamaynta iyo yaraynta wakhtiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay yareysaa qiimaha kheyraadka aadanaha, taasoo fududeyneysa geedi socodka iyo is-maandhaafka isticmaalaha
Macaamiisha hadda waxay u baahan yihiin astaamo is-dhexgal iyaga oo sameynaya go'aan gadasho, taas oo shirkadaha ku dhiirigelineysa in ay qaataan teknoolojiyadda kiosk. Tani, iyadu, waxay kobcin doontaa kobaca suuqyada suuqyada saqafka sare ee saadaasha.
Warshadaha Isgaarsiinta ee XiangLong wuxuu bixiyaa tayo balaaran oo tayo sare leh, biyuhu kama hortagaan, vandal adkaysi u leh keydka keydkas. Dhamaan furayaasha waxaa laga sameeyay waara Bir daxal laheyn or zinc alloy. Badhanka dusha, qaabka iyo qaabka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Hore: Talooyin ku Saabsan Isticmaalka Taleefoonnada Dadweynaha iyo Taleefoonnada Bixinta
Xiga: 4x4 stainless steel metal keypad installed in Uniqlo's vending machines